Mogadishu Journal » 2018 » August » 18
Mjournal :-Gudoomiyaha Baarlamaanka maamulka Puntland ayaa ka aqbalay mooshin ka dhan ah Shirkad laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta oo dhisaysa Dekedda Boosaaso. Baarlamaanka Puntland ayaa gudbiyey Mooshin ka dhan ah shirkada P & O oo qeyb ka ah DP WORLD, horeyna loogu...
Published time: 18 Aug, 2018 13:18Edited time: 18 Aug, 2018 16:34 When Austria’s foreign minister gets married, you can expect politicians to be there – but maybe not a foreign head of state. However, one of Karin Kneissl’s guests was Vladimir Putin, who arrived with a bouquet of...
Mjournal : -Taliye ku xigeenkii Hay’adda NISA C/qaadir Maxamed Nuur (Jaamac) ee dhawaan xilka laga qaaday ayaa loo magacaabay la taliye sare oo ka tirsan xafiiska guddoomiyaha golaha shacabka. C/qaadir Maxamed Nuur iyo Guddoomiye Maxamed Mursal Sheikh ayaa ka soo wada shaqeeyay...
Mjournal :-Wasaaradda arrimaha dibadda iyo Iskaashiga caalamiga ah oo fulinaysa amarka Ra’iisul Wasaaraha xukuummadda federaalka Soomaaliya (XFS) mudane Xasan Cali Khayre ayaa ku wargeliyay sii hayaha safaaradda, dhammaan diblamaasiyiinta iyo u-qaybsanayaasha ka hawl gala...
Mjournal :- Koofi Anaan oo ahaa xogxayihii hore Qaramada Midoobay ayaa saakay oo Sabti ah u geeriyooday Xanuun mudo yar haayey. Mr, Koofi Anaan oo ku dhashay dalka Gaana ee Africa sanadkii 1938, Koofi Annaan oo waxbarasha u aaday dalka Mareykanka isaga oo wax kasoo bartay...
Kofi Annan passed away from a “short illness” on Saturday, his family and the Kofi Annan Foundation announced in a statement. Annan, a former diplomat from Ghana, led the United Nations from 1997 to 2006. In 2001, Annan and the UN were co-recipients of the Nobel Peace Prize....
Ciidamada Ismaamulka Oromadda oo dilay 5 ruux oo Soomaali ah
Mjournal :-Wararka naga soo gaaraya duleedka Magaalada Harar ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada Oromadda ay dileen 5 ruux oo Soomaali ah. Sidda ay xaqiijiyeen dadka degaanka dilka waxaa fuliyay ciidamo hubeysan oo ka amarqaata maamulka dowlad degaanka Oromadda. Shanta ruux ee...
Faarax Macalin oo sheegay Jubbaland bil kasta lacag inay ka hesho Kenya
Mjournal :-Faarax Macalin oo ah Hoggaamiyihii hore ee aqlabiyadda Golaha Baarlamaanka dalka Kenya ayaa shaaciyay in dowladda Kenya ay taageero Ballaaran ay siiso maamulka Jubbaland. Waxaa uu sheegay in Ciidamo badan oo Kenyaan ay ku sugan yihiin Gudaha maamulka Jubbaland,...
HORDHAC: Chelsea v Arsenal – Blues Oo Dooneysa Inay Sii Wadato Guulaheeda
Kulanka ugu xiisaha badan Premier League toddobaadkan waxa uu dhexmari doonaa kooxaha Arsenal iyo Chelsea. Labada kooxood ee ku xifaaltama London ayaa is arkaya kulankii labaad ee Premier League-ga ol’olahan 2018-19. Iyaga oo mid walba uu hoggaaminayo tababare cusub, hadana waxaa...
Xoghayaha guud ee QM” Waa in askar la geeyo dhulka la heysto ee Falastiin”
Mjournal :-Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay ayaa sheegay in ay muhiim tahay in Qaramada Midoobey ay Ciidan geyso dhulka Falastiin ee ay heysato Israaiil. Antonio Guterres, ayaa tilmaamay in ay ahayd in dadka Falastiiniyiinta si wanaagsan loo ilaaliyo oo loo difaaco iyada oo...
RW Kheyre” Waxaa Muuqata Horumar weyn”
Mjournal :-Ra’isal Wasaaraha Xukuumada Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ka hadlaayay xeritaanka barnaamijka bandhiga carwada buugaagta ee Muqdisho ayaa sheegay in amniga ka jira caasimada ay sahashay in dad ajaaniib ah ay ku soo dhiiradaan in ay yimaadaan Muqdisho. Waxa uu...
Ciidamada Puntland oo dib ula wareegay deegaanka Af Urur
Mjournal :-Ciidamada Daraawiishta Puntland ayaa shalay oo jimco aheyd dib ula wareegay deegaanka Af-urur oo qiyaastii ku dhowaad 70KM u jirta magaalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari. Taliye kuxigeenka ciidanka daraawiishta Puntland Jen. Cabdi Axmed Xaashi ayaa sheegay in...